Faahfaahin: Qarax Masuuliyiin Lagula Eegtay Magaalada Jowhar. – Bogga Calamada.com
Faahfaahin: Qarax Masuuliyiin Lagula Eegtay Magaalada Jowhar.
Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax saacadihii lasoo dhaafay lagu weeraray xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka maamulka ashahaada la dirirka ah ee Hirshabeelle kaas oo ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe.
Qaraxa oo jugtiisa laga maqlay xaafado ka tirsan degmada Jowhar waxay ciidamada Mujaahidiintu la beegsadeen xubno xildhibaanno ah oo ku sugnaa magaalada, qaraxa waxa uu si gaar ah kaga dhacay hoy ay 3 xildhibaan kaga sugnaayeen magaalada Jowhar.
Macluumaadkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in qaraxaas ay ku dhaawacmeen 3 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabeelle, kuwaas oo dhaawacyadooda la dhigay cisbitaallada dowladda.
Xildhibaannada qaraxa ku dhaawacmay waxaa lagu magacaabaa Aadan Maxamed Muuse, Duwane Faarax Cali iyo Cismaan Cabdullaahi Dhoore waxayna ilo wareedyadu xaqiijiyeen in mid ka mid ah xildhibaannada uu ku sugan yahay xaalad daran maadaama uu dhaawiciisu yahay mid culus.
Qaraxan waxa uu kusoo beegmayaa xilli degmada Jowhar ay ku qulqulayaan siyaasiyiin iyo xubno ka tirsan dowladda Ridada federaalka halkaas oo dhawaan la doonayo inay ka qabsoomaan doorashooyin ku sheegga dowladda Ridada.